EX - ABSDF: ဗိုလ်ခင်ညွန့် ပြည်သူကို စာအုပ်ရေးပြီး၊ ဝန်ချတောင်းပန်..
ဗိုလ်ခင်ညွန့် ပြည်သူကို စာအုပ်ရေးပြီး၊ ဝန်ချတောင်းပန်..
စာအုပ်အထူကြီး စာမျက်နှာပေါင်း (၆၅၇) မျက်နှာရှိပြီး တန်ဖိုး(၈,၀၀၀)ကျပ်၊ ဝယ်ဖတ်စရာမလို၊ ဝယ်ထားစရာလဲမလိုတဲ့ ကိုယ်အကြောင်းကို အမွှန်းတင်ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကလည်းပြောပါတယ်။ ကွယ်လွန်သူ ဗိုလ်စိုးဝင်း (ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း) စာအုပ်ကလည်း သနားစရာ၊ အမွှာညီအစ်ကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်၂ဦး ရှေ့ဆင့်၊နောက်ဆင့်ကွယ်လွန်သွားတာတွေ ဖတ်လို့သိပ်ကောင်းတယ် ပြောကြ ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါး အကျဉ်းဆောင်းပါးဖတ်ရင် လုံလောက်ပါတယ်။
ဗိုလ်ခင်ညွန့် ကောင်းတာတွေချည်းပဲရေးပြီး၊ သမိုင်းကို ပြောင်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ အခုခေတ်လူငယ်များက လူကောင်း၊ လူဆိုး ခွဲခြားတတ်နေပါပြီ။ အမှန်တရားက နောက်ဆုံးမှာ အနိုင်ယူပါတယ်။ အားလုံးကိုယ်မှားတာကို အမြန်သိပြီး ပျက်အစဉ်ပြင်ခဏ ..တောင်းပန်ဝန်ချမှုကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ဗိုလ်ထွန်းကြည်လို စာအုပ်အထူကြီးတွေရေးနေသူ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများလဲ ဗိုလ်ချင်ညွန်လို ဝန်ချတောင်းပန်ကြမယ် မျှော်လင့်ပါတယ်...။
7days ဂျာနယ်ဆောင်းပါးကို ကောက်နုတ်ချက်
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်ရေးသား သည့် ‘‘ကြုံတွေ့ခဲ့ရ ကျွန်တော့် ဘ၀အထွေထွေ’’ ဖြတ်သန်းမှု အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ် မတ်လ ၁ ရက် တွင် ထွက်လာသည်။
နောင်လာနောင်သားလူငယ်များ သင်ခန်းစာယူစေနိုင်ရန်နှင့် သမိုင်းမှန်ကို သိရှိစေနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ သည့် ၂၀၀၄ အထိ အဖြစ်အပျက်များကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး မိမိတာဝန်ယူခဲ့သည့် ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များထဲတွင် မမှန်မကန်လုပ်သူ၊ အမှားအယွင်းလုပ်သူ တချို့တစ်ဝက် ရှိနိုင်ခဲ့သည်ဟု အမှာစာတွင် ပါရှိသည်။
ထိုသို့အမှားလုပ်သူများနှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး အနေဖြင့် မိမိတောင်းပန်ပါကြောင်း ထည့်သွင်းရေးသားထားသည်။
၎င်းအာဏာရှိစဉ်ကာလက နိုင်ငံ့ကောင်းကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများကို အခန်းလိုက် ရေးသားတင်ပြထားသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးခင်ညွန့်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေတို့ တွေ့ဆုံစဉ်က အမှတ်တရဓာတ်ပုံများကိုလည်း ထည့်သွင်း ဖော်ပြသည်။ တာဝန်များမှ ရပ်စဲပြီး အမှတ်(၂၇) န၀ဒေးလမ်းနေအိမ်တွင် အကျယ်ချုပ်ချထားစဉ် ကာလများကိုလည်း အခန်းခွဲ ၍ တင်ဆက်ထားသည်။
၎င်းကို အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်နေ့က ဖြစ်စဉ်မှာ ‘‘လေဆိပ်မှ မိမိရုံးခန်းရှိရာ စစ်ရုံးချုပ်သို့ ထွက်ခွာပြီး မိမိ၏ရုံးခန်းအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်အထိ မိမိစိတ်တွင် ထူးခြားမှုရှိသည်ဟု မထင်မိသေးပါ။ မိမိရုံးခန်းအတွင်းရောက်၍ ငါးမိနစ်ခန့်အကြာမှာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးက သူ့ရုံးခန်းသို့ လာရောက်ရန်ခေါ်သဖြင့် ခရီးစဉ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်များကို ပြင်ဆင်ယူဆောင်ကာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး၏ ရုံးခန်းသို့ ၀င်ရောက်လိုက်သည်တွင် ထူးခြားမှုကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်း၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်တို့ရောက်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် ထူးခြားမှုတော့ ဖြစ်နေပြီလို့ ထင်လိုက်မိပါသည်။ ကုလားထိုင်တွင် ထိုင်တောင်မထိုင်လိုက်ရသေးပါ။ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးက ‘‘ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် . . . ခင်ဗျား အခုအိမ်ကို ပြန်နေလိုက်ပါ။ ခင်ဗျားရဲ့တပည့်တွေကိုလည်း ခေါ်ယူမေးမြန်းမှုတွေလုပ်နေပါပြီ။ အိမ်ရောက်ရင်တော့ ဘယ်မှမသွားပါနဲ့တော့။ အိမ်မှာပဲနေပါ’’လို့ပြောလိုက်တော့ ကျွန်တော်သိပါပြီ။ ကျွန်တော့်ကို အရေးယူလိုက်ကြပြီပေါ့။ စောစောပိုင်းကတည်းက ကျွန်တော့်အပေါ် အမြင်မကြည်လင်ဘူးဆိုတာ သိထားလို့ တုန်လှုပ်စရာမဖြစ်မိတာအမှန်ပါပဲ။ ‘‘အေး . . . သိပ်ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ အေးအေးချမ်းချမ်းနေရတာပေါ့ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် . . .’’ ဟု ခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောပြီး မိမိရုံးခန်းရှိရာသို့ ခပ်သုတ်သုတ်ဆင်းခဲ့ပါသည်’’
ဦးခင်ညွန့်က အခန်းလိုက် ခေါင်းစဉ်များဖြင့် ရေးသားထားပြီး ကျွန်တော်နှင့် လူကြီးသူမများဟူသည့် အခန်းတွင် ဦးနေ၀င်း၊ ဦးစောမောင်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သမ္မတကြီးဦးစန်းယု၊ ဦးစိန်လွင်၊ ဒေါက်တာမောင်မောင်၊ စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်ကြုံတွေ့ရသည့် အကြောင်းအရာများကိုလည်း အနည်းငယ်တို့ထိ ရေးသားထားသည်။
ထိုအထဲမှာ ကျွန်တော်နှင့် ဗိ်ုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအခန်းတွင် ဦးခင်ညွန့်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် အပြန်အလှန် လေးစားမှု၊ ရင်းနှီးမှုရှိသည့်အပြင် နောင်အနာဂတ်တွင် နီးနီးကပ်ကပ်နေထိုင်နိုင်ကြရန်အတွက် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရှစ်မိုင် အေ၀မ်းခြံအနောက်ဘက်၌ မြေကွက်တစ်ကွက်စီ တိုင်ပင်၍ ၀ယ်ယူထားသေးကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ‘‘ကျွန်တော့်ကို အရေးယူလိုက်သည်ဟုဆိုရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ သဘောဆန္ဒတစ်ခုတည်း မဖြစ်နိုင်။ ယင်း၏ ရှိရင်းစွဲသဘောထားကို ယိမ်းယိုင်အောင် ဘေးတီးပေးသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အရေးယူဖြစ်အောင် ၀ိုင်းဝန်းဖန်တီးကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များရှိနေသည်ဟု သိရှိရပါသည်။ ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေဆိုတာ ကျွန်တော်သိနေပါသည်။ ဖော်ပြမပြောလိုပါ။ ကာယကံရှင်များကိုယ်တိုင် အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ’’ဟု ရေးသားထားသည်။
ကျွန်တော်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟူသည့်အခန်းမှာလည်း ဦးခင်ညွန့်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ညီမတစ်ဦးလို သဘောထားသည့်စိတ်က ပြောင်းလဲခြင်းမရှိကြောင်း၊ နောက်ပိုင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် ဒေါ်စု အကြိမ်ကြိမ်တွေ့တုန်းကလည်း အစပိုင်းတွင် သဘောထားတွေ ကောင်းခဲ့ကြပြီး ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်၍ ရသည့်အဆင့်ထိ ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။
ဦးခင်ညွန့်က နိုင်ငံရေး မလုပ်တော့ဟု မီဒီယာသို့ ယခင်က ပြောထားခဲ့ဖူးသည်။ ယခုစာအုပ်တွင်လည်း ထိုပြောကြားချက်ကို ထပ်မံဖော်ပြထားသည်။
ဒီပဲယင်းအရေးအခင်း အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ခဲ့စဉ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ယာဉ်တန်း မုံရွာမြို့သို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် "ကျွန်တော်တို့ လူလည်းစုံရော . . .ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက တို့ . . . ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ယာဉ်တန်းကို တားဆီးရမယ်။ ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ တားဆီးရမယ်" လို့ ပြောပါသည်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်၍ ကျွန်တော့်ကို လုံးဝတာဝန်မပေးတော့ဘဲ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းကို ဦးဆောင်စေကာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်ကို လိုက်ပါစေလျက် ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် မုံရွာသို့ စေလွှတ်လိုက်ပါသည်’’ဟု ဦးခင်ညွန့်က ထုတ်ဖော်သည်။ ဒီပဲယင်းဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးတွင် ဦးဆောင်ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရခြင်းမဟုတ်သော်လည်း အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည့်အတွက် မိမိမှာလည်း တာဝန်ရှိသည်ဟု ခံယူကြောင်း၊
တပ်မတော်အစိုးရအတွင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်မှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေသို့ ခေါင်းဆောင်အပြောင်းအလဲကိစ္စကိုလည်း ဦးခင်ညွန့်က အနည်းငယ် ဖော်ထုတ်ထားသည်။ ‘‘ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး(စောမောင်)၏ ကျန်းမာရေးသည် မြစ်ကြီးနားခရီးစဉ်၊ မန္တ လေးခရီးစဉ်၊ မုံရွာခရီးစဉ်တွေမှာ ထူးခြားမှုပိုဖြစ်လာသည်။ ပုံမှန်မဟုတ်တော့ပါ။ အနီးကပ် စောင့်ရှောက်မှုကတော့ ဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်လည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့် ကျွန်တော်တိုင်ပင်ကြသောအခါ ဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးနေ၀င်း(ငြိမ်း)ထံ သွားရောက် အကြံဉာဏ်ယူရန် သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။ အေဒီလမ်းအိမ် ဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးနေ၀င်း(ငြိမ်း)ကို အခြေအနေအရပ်ရပ် ရှင်းပြလိုက်တော့ . . . ဒါဆို ဒီကိစ္စက တိုင်းပြည်၏ မကောင်းကျိုးကိုဖြစ်နိုင်သလို တပ်မတော်အတွက်လည်း အခြေအနေကောင်း ဖြစ်မလာဘူး။ ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကလည်း တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်စရာရှိတာကို ဆောင်ရွက်လိုလက်ပါ။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်က ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါ . . . ဆရာဝန်များနှင့် တိုင်ပင်ပြီးမှ ဆောင်ရွက်ပါဟု အကြံ ဉာဏ်ပေးပါသည်’’
ထို့နောက် တိုင်းမှူးများ စုံလင်စွာ အစည်းအဝေးအခန်းကို အလုံပိတ်ထားလိုက်ပြီး တိုင်းမှူးများ၊ န၀တအဖွဲ့ဝင်လူကြီးများနှင့် ၀န်ကြီးများကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် ကျွန်တော်တို့က ရှင်းလင်းကြပါသည်။ ထို့နောက် ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကပင် ဆက်လက်၍ ခေါင်းဆောင်မှုယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်ကပဲဆက်ရှင်းသည်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်ကတော့ သူ၏နေအိမ်မှာ ဆရာဝန်များ၏ စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ရှိနေစေပါသည်။ အထူးအစည်းအဝေးမှာ အားလုံးက သဘောတူညီကြသဖြင့် ညပိုင်းမှာ မြန်မာ့အသံက သတင်းကြေညာချက် ထုတ်ကာ ခေါင်းဆောင်မှုအပြောင်းအလဲကို ပြည်သူများသို့ အသိပေးခဲ့ပါသည်ဟုဆိုလေသည်။
ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်ချက်များ အခန်းတွင် ကိုးကန့်၊ ၀၊ဦးခွန်ဆာ၊ ကေအိုင်အေ၊ ကေအန်င်ယူ၊ဗကပ(၁၀၁) စစ်ဒေသ၊ SSA စသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်များကို ရေးသားဖော်ပြထားသည်။ ကိုးကန့်လက်နက်ကိုင်များ စိုးမိုးထားသည့် နယ်မြေအတွင်းသို့ ဦးခင်ညွန့်က တပ်စုတစ်စုသာ လုံခြုံရေးအနေနှင့် လိုက်ပါစေပြီး ချင်းရွှေဟော်အထိ သွားရောက်ခဲ့သည်။ သူတို့အင်အား တစ်ထောင်ခန့် ယှဉ်ကြည့်လျှင် အခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲဆိုတာခန့်မှန်း၍ရသည်။ ..........ရောက်ရောက်ချင်းပဲ ခေါင်းဆောင် ဦးဖုန်ကြားရှင်က လုံခြုံရေးလည်းမပါပါလား။ ဘာကြောင့် လုံခြုံရေးတပ်မခေါ်လာတာလဲဟု မေးတော့ ကျွန်တော်ကပဲ ခင်ဗျားတို့က ကျွန်တော့်လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူထားပြီးဖြစ်လို့ ကျွန်တော့်အတွက် သီးခြားလုံခြုံရေးမလိုတော့လို့ ခေါ်မလာတာပါဟု ပြန်ဖြေကာ ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်လိုက်တာပါပဲ’’ဟု တင်ပြသည်။
၈၈ အရေးအခင်းကာလဖြစ်ရပ်များတွင်‘‘ပထမပိုင်းတွင် ရိုးသားစွာဆန္ဒပြ တောင်းဆိုနေကြသော ကျောင်းသားများနှင့် ရိုးသားသောပြည်သူများ၏ နောက်တွင် အကြမ်းဖက်သမားများနှင့် ဗကပ ယူဂျီများ ပါဝင်သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်အောင် ဖန်တီးခြင်းများ ပြုလုပ်သည်ကိုတွေ့ရသည်’’ဟု ၎င်း၏ထင်မြင်ချက်ကို ရေးသားထားသည်။
ကျွန်တော့ဘ၀ကိုဆန်းစစ်ခြင်းဟူသည့် အခန်းကို ရေးသားရာတွင် ဦးခင်ညွန့်က ပြည်သူများသို့ တောင်းပန်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
နယ်စပ်ဒေသနှင့် အစွန်အဖျားဒေသတွေမှာ တာဝန်ထမ်းရွက်ကြသည့် ကျွန်တော့်တပည့်များ၏ မှားယွင်းသော လုပ်ဆောင်မှု၊ လောဘတက်မှု၊ အာဏာအလွဲသုံးစားပြုမှုတွေကြောင့် ထောက်လှမ်းရေးတစ်ဖွဲ့လုံး ပြိုကွဲသွားရသည်ကို သံဝေဂရပါသည်’’ဟု ရေးသား ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
အခန်း(၇၁)တွင် ဖော်ပြထားသည့်ခေါင်းစဉ်မှာ မလိမ္မာသော ကျွန်တော့်တပည့်များ ကိုယ်စား တောင်းပန်ခြင်းဟူ၍ဖြစ်ပြီး မြို့နယ်အဆင့်နေရာဒေသများတွင် တာဝန်ယူခဲ့သည့် အရာရှိမဟုတ်သော အခြားအဆင့် ထောက်လှမ်းရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ၎င်းမြို့နယ်တွင် တာဝန်ယူခဲ့ကြသည့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများအပေါ် မောက်မာစွာ ဆက်ဆံခြင်း၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ အရှိန်အ၀ါနှင့် အာဏာကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခဲ့သူများလည်းရှိကြောင်း ၀န်ခံထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။
‘‘လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ပြုလုပ်သည့် တပ်မှူးများ၊ တာဝန်ရှိသူများလည်းရှိခဲ့ရာ အထူးသဖြင့် မူဆယ်၊ ကွတ်ခိုင်ဒေသတွင် တာဝန်ထမ်းရွက်ခဲ့သော အရာရှိများ၏ မသမာမှုကြောင့် နိုင်ငံတော်အတွက် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ ရှိခဲ့ကြောင်းကိုလည်း သတင်းများအရ သိရှိခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်တော့်ကိုပါ တာဝန်ရှိသူအနေဖြင့် ထောင်ဒဏ် (၄၄)နှစ် ချမှတ်အပြစ်ပေးခြင်း ခံခဲ့ရပါသည်။ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းကြီး တစ်ခုလုံးကိုပါ ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ ဒီဖြစ်ရပ်များသည် သင်ခန်းစာယူစရာ သံဝေဂရစရာများဖြစ်ပါသည်။ အပြစ်ကျုးလွန်သူများကို ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းသည် မှန်ကန်သည်ဟု ခံယူမိပါသည်’’ဟု ၎င်းက ဖော်ပြထားသည်။
ထို့နောက် ဦးခင်ညွန့်က ‘‘ကျွန်တော့်အနေဖြင့် မိဘပြည်သူများကို အသိပေးလိုတာကတော့ မလိမ်မာသော ကျွန်တော့်တပည့်များ၏ အမှားအယွင်းပြုလုပ်ခဲ့မှုများ၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်သူအချင်းချင်း အပေါ်စီးဖြင့် မောက်မာစွာဆက်ဆံခဲ့မှုများ၊ မိဘပြည်သူများအပေါ် အမှားအယွင်းပြုလုပ်ခဲ့မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်တော့်တပည့်များနှင့် ကြုံဆုံခဲ့ရသော မိဘပြည်သူများနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကို အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါသည်’’ ဟု ဆိုသည်။ မိမိ၏တပည့်များမှာ တိုင်းပြည် ပုန်ကန်သူများ၊ ခိုးဆိုးလုယက်ကြသူများ မဟုတ်ဘဲ လောဘဇောတက်၍ မှားယွင်းခဲ့ကြသူများဖြစ်ကာ ပြစ်ဒဏ်ကျ ခံနေရသည်မှာ ယခုဆိုလျှင် ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်ရှိနေကြပြီဖြစ်သည့်အပြင် ၎င်းတို့မိသားစုများမှာလည်း ဒုက္ခအဖုံဖုံကို ဆက်လက်ခံစားနေကြရကြောင်း၊ မိမိအနေနှင့်လည်း သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ထံသို့ မေတ္တာရပ်ခံစာ တင်ပြထားကြောင်း၊ ကျန်ရှိတပည့်များ ပြန်လည်လွတ်မြောက်စေလိုသည့်အတွက် ယခုစာအုပ်မှ ထပ်မံတင် ပြရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို ရေးသားထားပါသည်။
ယခုစာအုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဖတ်ရှုရသည့် စာရေးဆရာတစ်ဦးက ၎င်း၏အမြင်ကို အောက်ပါအတိုင်းပြောပါသည်။‘‘ဖြစ်စဉ်တွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရေးထားတာမျိုးလည်း သိပ်မပါဘူး။ ဒေါ်စုနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အခန်းကလည်း နည်းနည်းလေးပါ။ ခြုံပြောရရင် သူငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ခဲ့တာတွေကို ကြွားလုံးထုတ်တဲ့သဘောပါပဲ။ ပြီးတော့ ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့ဝင်အနည်းစုက မှားခဲ့တယ်ပြောထားတာ တကယ်တော့ အများစုက မှားခဲ့တာ’’ ..ဟု မှတ်ချက်ပေးသည်။
ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ်၊ ၂၀၀၀ ပြည်ပတွင်ထုတ်ဝေခဲ့သော ဗိုလ်ခင်ညွန်အာဏာ အလွန်ကြီးခဲ့စဉ်ဖြစ်ရပ်များစာအုပ်တွင် စစ်အာဏာရှင်ကြီးဦးနေဝင်းနှင့်တပည့်များ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်တို့၏ စရိုက်ဆိုးများကို ရယ်မောဘွယ်ရာ သံတမန်တစ်ဦးက မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ဖြစ်ရပ်မှန်စာအုပ်အကြောင်း ဆောင်းပါးတပုဒ်ကို ကောက်နုတ်ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
" ဒီစာအုပ်မှာ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကို စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်းက မည်သို့မြေတောင်မြှောက်ပြီး၊ ဗိုလ်ခင်ညွန်သည် စစ်အာဏာရှင်၏ အပေါက်စောင့် အဆင့်မျှသာရှိသည် ဟုရေသားထားသည်။ စစ်အာဏာရှင်ဦးနေဝင်း အုပ်ချုပ်စဉ်က ဆိုရှယ်လစ်ဒီမိုကရေစီဟု ဘန်းပြပြီး အခြေခံဥပဒေများတွင် ရေးဆွဲထားသော်လည်း ဦးနေဝင်းကိုယ်တိုင် လုံးဝမကျင့်သုံးပဲ မျက်နှာလွှဲခဲ့သည့် သာဓက မြောက်များစွာအနက်မှ အဖြစ်အပျက်တခုကို တင်ပြပါမည်။"
သမ္မတကြီးရာထူးနှင့် နိုင်ငံတော်ကောင်စီ ဥက္ကဌ ရာထူးပိုင်ရှင် ဦးနေဝင်း သဘာပတိအဖြစ် ကျင်းပနေသည့် နိုင်ငံတော်ကောင်စီ အစည်းအဝေးတခုတွင် ရခိုင်အမျိုးသား သတင်းစာဆရာ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် ဦးလှထွန်းဖြူက ဦးနေဝင်းပြောကြားသည့် ကိစ္စတခုကို အချေတင်ပြန်လည်ပြောကြားမိရာ၌ စကားမဆုံးမီပင် ဦးနေဝင်းသည် ဒေါသထွက်သွားပြီး အစည်းဝေးခမ်းမမှ ထွက်သွားကြောင်း၊ ယင်းနေ့မှစ၍ တခြားနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် ၂၀ကျော်တို့သည် ၄င်းအား၊ နှုတ်လည်းမဆက်၊ စကားလည်းမပြောကြတော့ကြောင်း၊ နောင်အစည်းအဝေးတခုတွင် ဦးနေဝင်းက သူ့အားစကားစမြည်ပြောမှသာ အခြားနိုင်ငံတော် ကောင်စီဝင်များက သူ့ကို ခေါ်ခေါ်ပြောပြော ပြန်လုပ်ကြောင်း၊ "အဲဒီအကောင်တွေ တော်တော်ဆိုးကြတယ်ကွာ၊ အစည်းအဝေးမှာ ဘာစကားတခွန်းမှ မပြောကြပဲ ကျွေးတာမွေးတာ ပလုပ်ပလောင်းစားပြီး၊ လက်ညိုးထောင်၊ ခေါင်းငြိမ့်ယုံသာ တတ်တဲ့ နဗလိန်းတုံးတွေပဲ" ဟု ပြောပြခဲ့ဖူးပါသည်။
ထို့ကြောင့်လဲ စစ်ဝါဒီ ဦးနေဝင်းတို့၏ ဒီမိုကရေစီ၊ "ခေါ်ရင်သွား၊ ခိုင်းတာလုပ်၊ ခံမပြောနဲ့" ဟုသော "ခ" သုံးလုံး ဒီမိုကရေစီသာဖြစ်သည်ဟု အများတကာ ပါးစပ်မှ ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါသည်။
ယခုတဖန် ဦးနေဝင်း၏ အပေါက်စောင့် ခင်ညွန့်သည်လည်း ဦးနေဝင်းကဲ့သို့ပင် နဝတ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဝန်ကြီးများအား စကားပြောခွင့်ပင် မပေးသောကြောင့် ခင်ညွန့်မှခင်ညွန့်၊ ခင်ညွန့်ပြောသမျှသည် နိုင်ငံတော်ဥပဒေ ဖြစ်နေပြန်ပါသည်။
ဤသို့ဖြင့် မိမိ နဝတ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဝန်ကြီးများကိုပင် မယုံကြည်၍ နေရာတကာတွင် ပဲခူးစားလုပ်နေသော ခင်ညွန့်အနေနှင့် လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်များအားလည်း ယုံကြည်ပါ့မလား ဆိုသည်မှာ စဉ်းစားစရာပင် ဖြစ်သကဲ့သို့ ပြည်သူလူထုအား ယုံကြည်အားကိုးပါ့မလား ဆိုသည်မှာ ဆိုသည်မှာလည်း ထိုနည်းအတူပင် ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်များနှင့် လက်တွေ့ခင်ညွန့်၏ လုပ်ရပ်များကို လေ့လာပါက အချင်းချင်း မယုံကြည်သောစိတ်ဓါတ်၊ ဆရာကြီးလုပ်ချင်သော လောဘ၊ အသိပညာရှင်၊အတတ်ပညာရှင်များအား မခန့်လေးစားပြုလုပ်သွားသည် ဥာဉ်တို့သည် ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်နှင့် လုံးဝဆန့်ကျင်ပြီး ငါတကောကောနေသည့် အမိန့်ပေး အာဏာပြဝါဒ၊ လွှမ်းမိုးနေသော စစ်ဝါဒီစနစ် (Military Authoritarian Systems) အကြွင်းမဲ့ မိုက်မဲစွာ ယုံကြည်ကျင့်သုံးနေသည်မှာ လယ်ပြင်တွင် ဆင်သွားသလို ထင်ရှားနေပါသည်။
ခင်ညွန့်နှင့် နဝတများ၏ မတရားသဖြင့် တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာများအား ရိုက်စားနေကြသည်များကို ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားနေကြသည့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုန်သည်ပွဲစားများက အတွင်းသိ၊ အစင်းသိ ဖြစ်နေကြ၍ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရန်အတွက် အဓိကကျသည့် အခွန်အကောက်များကို မှန်မှန်ကန်ကန်မပေးပဲ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဆန့်ကျင်လျှက်ရှိနေကြပါသည်။
ဒန်ပေါက်တထုတ်ကို ကျပ်၅၀ ပတ်ဝန်းကျင်ခန့် ဖြစ်နေချိန်တွင် နာမည်ကြီးဒန်ပေါက်ဆိုင် တဆိုင်၏ တနေ့ရောင်းရငွေသည် ၄၄ကျပ်ဟု ၄င်း၊ ရွှေတကျပ်သားကို ၃သောင်းနီးပါး ရှိနေချိန်တွင် ရွှေဆိုင်တဆိုင်၏ တနေ့ရောင်းရငွေသည် ကျပ်၁၃ဝ နှင့် ၁၈၀ ဟု အခွန်ကြေညာလွှာများတွင် ဖော်ပြနေ၍ ခင်ညွန့်ကိုယ်တိုင် အခွန်အကောက် မှန်မှန်ကန်ကန် ပေးကြရန် လိုက်လံဆော်သြနေရသည်ဟု မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဖတ်ရှုရပါသည်။
၂၂-၁၁-၉၄ နေ့တွင် အပေါက်စောင့် ခင်ညွန့်က "ပေးသင့်သော အကောက်အခွန်ကို မပေးဆောင်ရအောင် တိမ်းရှောင်ကပ်ခိုနေသူများမှာ မတရားသဖြင့် တာဝန်နှင့် သစ္စာကို ထိမ်ချန်ရာကျသောကြောင့် လောကတွင် အရှက်ကွဲကြရုံမက၊ ငရဲလားရန်အကြောင်း၊ မကောင်းမှုကိုလည်း ပြုရာရောက်သည်" ဟု သူခိုးက လူကို ဟစ်နေပြန်ပါသည်။
ဦးနေဝင်း၏ တံခါးပေါက်ကို စောင့်ရန်အတွက် နိုင်ငံခြားသို့ ဦးနေဝင်းနှင့်အတူ အခေါက်ခေါက်အခါခါ သွားရောက်ခဲ့ရသော ခင်ညွန့်အနေနှင့် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်တွင် ၄င်းတင်သွင်းလာသည့် ပစ္စည်းများအတွက် အကောက်အခွန် ပေးရိုးထုံးစံ ရှိခဲ့ဖူးပါသလား၊ ယခုလည်း ခင်ညွန့်နှင့်တကွ နဝတ ဝန်ကြီးများ နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတိုင်း လေဆိပ်မှ အကောက်အခွန် ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်အရ သူတို့၏ သေတ္တာကို ဖွင့်ပြခဲ့ဖူးကြပါသလား။
အမှန်တကယ်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အခွန်အကောက် မပေးမိခဲ့သော ခင်ညွန့်သည် ဦးနေဝင်း၏ မစင်ထုပ်ကြီးအား သူ့ခေါင်းပေါ်တွင် တဦးတည်း ရွက်ထားရခြင်း၊ ကျောင်းသားလူငယ်များအား အာဏာသားသဖွယ် အတုံးအရုံး သေအောင် သတ်ဖြတ်ခဲ့ရခြင်း၊ နိုင်ငံရေးသမားများအား နေ့စဉ်နှိပ်စက် ညှင်းပမ်းနေရခြင်း၊ တနေ့လျှင် ၉နေရာ၊ ၁၀နေရာ သွားရောက်ပြီး အအိပ်ပျက်၊ အစားပျက်ခံကာ ဝါးလုံးကို ဝါးခြမ်းပါဟု လိမ်လည်နေရခြင်းများသည် အပါယ်ငရဲသို့ သွားရာခရီးလမ်း (နဝတ) ဘူတာ၌ လောကငရဲသို့ ရှေ့ရှုနေခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် အပေါက်စောင့်ခင်ညွန့်တို့ အုပ်စုသည် ဝါဇီစက်ရုံမှ ရိုက်ထုတ်သည့် ကျပ်ငွေများကို သေတ္တလိုက် (ပြည်ထောင်စုဘဏ်သို့ ပို့သည့် လမ်းခုလပ်မှ ဖြတ်ယူထားကြပြီး) အနီးကပ်ကိုယ်ရံတော်များနှင့် အာဏာသားငယ်များအား တပ်သားရိုးရိုးပင် ဖြစ်သောငြားလည်း ဗိုလ်မှုးကြီး လစာအတိုင်း တဦးလျှင် ကျပ် ၁၈၀၀ခန့် ပေးထားရကြောင်း၊ ယင်းသို့ စစ်တပ်ထဲတွင် အောက်ကြေးပေးရသည့် လစားများကြောင့်၊ ငွေဖေါင်းပွမှုသည် တနေ့တခြား ဒုံးပျံကဲ့သို့ မြန်ဆန်စွာမြင့်တက်နေကြောင်းများကို ကိုယ်တိုင် ငွေမဲလစာများ ရနေသော စစ်သားမိသားစုများထံမှ အပုပ်နံ့များ ထွက်ပေါ်နေလျှက် ရှိနေပြန်ပါသည်။
ယနေ့ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများ၏ နိုင်ငံရေး ဦးတည်ချက်သည်လည်း စစ်အာဏာရှင် ချုပ်ငြိမ်းသွားရေးသည် ပထမှနှင့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မြတ်နိုးသူ ပြည်သူများအနေနှင့် စုစုရုံးရုံး အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်စု၏ ဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွင် ပါဝင်အားပေးရေးသည် ဒုတိယ ဦးတည်ချက်ကြီး ဖြစ်ပါသည်။
အချုပ်ဆိုရသော် "စုနိုင်မှသာလျှင်" အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအား စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ကြီးအဖြစ် တည်ထောင်နိုင်မည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ်၊ အမှန်၂၆၊ မေလ၊ ၁၉၉၄ခုနှစ်။
စရိုက်ကောင်းများဖြင့်နိုင်ငံတည်ဆောက်ခြင်း (Mission Possible)ဗိုလ်ခင်ညွန့်၊ ဗိုလ်စိုးဝင်း၊ ဗိုလ်ထွန်းကြည် ..စသည့်စာအုပ်များမှာ ဘယ်လောက်သနားစရာ၊ အားကျစရာကောင်းအောင် ရေးထားသော်လည်း ယူကြုလို အင်တာနက်ရုပ်သံများတွင် တကယ့်မျက်ရည်နှင့် ဝန်ချတောင်းပန် နိုင်ရပါမည်။ တောင်ကိုးရီးယား စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် အပေါင်းပါများသည် နိုင်ငံတော်တီဗွီတွင် မျက်ရည်ဖြင့် ပြည်သူများကို ဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့ကြသည်။ အဂတိလိုက်စားသော ဒေဝူးကုမ္ပဏီ အကြီးအကဲလည်း ပြည်ပထွက်ပြေးရာမှ ပြန်လာပြီး ပြည်သူလူထုကို တီဗီမှ ဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့သည်။ မိမိအမှားကို အမှားမှန်းသိပြီး နှုတ်ဖြင့်ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းသည် အသက်ရှင်နေစဉ်လဲ စိတ်ရှင်းသည်။ သေဆုံးပြီး နောင်ဘဝတွင်လည်း ဝန်ပေါ့သည်။ အသေလည်းဖြောင့်ပါသည်။
ယခုအခါ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရ၊ ၄နှစ်၊ ဒီမိုကရေစီ မီဒီယာပွင့်လင်းလာချိန်တွင် လေ့လာမှု၊ အသိဥာဏ် အတိုးတက်ဆုံးမှာ အသက်၃၀ အောက် လူငယ်များဖြစ်သည်။ အဂတိ ကင်းရှင်းကြသူများ ဖြစ်သည်။ စင်ကာပူသို့ အိမ်ဖေါ်လာလုပ်သော အလည်တန်းပညာအဆင့် မြန်မာမိန်းကလေးလည်း ၊ ၃လကြာချိန် အင်္ဂလိပ်စကား ဘိုလိုတော့ လုပ်နိုင်လာသည်။ ပုဂံ၊ ညောင်ဦး၊ ကျိုက်ထီးရိုးမှ တိုးရစ်အရောင်းဆိုင် မူလတန်းပညာအဆင့် ဈေးသည်များလဲ၊ အင်္ဂလိပ်စကားသာမက၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ ဂျပန်၊ ကိုးရီးယား စကားများ နှုတ်ဆက်ပြောဆိုနိုင်လာသည်။ သူတို့ဘဝ တိုးတက်ဖို့ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားပြော ကြိုးစား၊ တမဟုတ်ချင်း လပိုင်းအတွင်း တိုးတက်လာသည်။ ပညာတတ် ဘွဲ့ရလူငယ်များက ပိုပြီးအစွမ်းထက်သည်။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ တယ်လီဖုန်း၊ နည်းပညာ၊ စက်မှု၊ လျှပ်စစ်၊ လူမှုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးပညာရပ်များကို အင်တာနက်၊ ဖေ့စ်ဘုတ်များ၊ ရောက်လာသော နိုင်ငံခြားပညာရှင်များဖြင့် အပြန်လှန်ဆွေးနွေးခြင်းများဖြင့် တဟုန်ထိုး တိုးတက်နေပါသည်။ လိုင်စင်ပါမစ်များဖြင့် ကျိကျိတက်ချမ်းသာနေသူများနှင့် အချိန်တွေ ပိုနေသူများ၊ သမိုင်း၊ နိုင်ငံရေးသုတေသီများသာ ထိုစာအုပ်ကြီးကို ဖတ်ကြပါလိမ့်မည်။ တိုးတက်၊ ကြိုးစားနေသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားများ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ကိုယ်ရည်သွေး စာအုပ်ကြီးကို ဖတ်ပြီး အချိန်မကုန်နိုင်။ ကျနော် မြန်မာပြည်တလွှား ခရီးစဉ်များမှ သုံးသပ်ချက်ပါက ..ကျောင်းသားလူငယ်များ၊ အမှန်တရားဘက်တော်သားများ အောင်ပွဲခံဖို့ နီးလာပြီဖြစ်သည်။
ယခင်က စစ်အာဏာဖြင့် ရိုက်နှက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး၊ ယခု ထိုစစ်အာဏာရှင်ဟောင်းများနှင့်ခရိုနီများပူးပေါင်းပြီး ငွေအာဏာရှင် (လက်ဝါးကြီးအုပ်အရင်းရှင်စနစ်)ဖြင့် အုပ်ချုပ်ဖို့လုပ်နေပြန်သည်။ ဘေးနားမှ တရုပ်နိုင်ငံကြီးကဲ့သို့ လပ်စားမှုများကို ပြက်ပြက်သားသားမကိုင်တွယ်နိုင်ပါက ကျနော်လည်း မြန်မာပြည်တော်ပြန်ဖို့ အလွန်အလှမ်းဝေးနေဦးမည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက် ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်၊ ကျနော့်မိသားစုကိုလဲမကယ်နိုင်ပါ။ နောက်ဆုံးမိမိကိုယ်ကိုပင် မကယ်နိုင်လောက်အောက် ကျနော့်အကျင့်ဆိုးများမဖျောက်နိုင်။ မိမိအသက်မသေခင် ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်၊လုပ်တဲ့အတိုင်းပြော၊ပြောတာလုပ်တာမှတ်တမ်းရှိ ..ဆိုသည့် ISO 9000 ဆောင်ပုဒ်ကိုလိုက်နာမည်။ စနစ်ဆိုးအမွေ၊ မိမိ၌တွယ်ကပ်နေသော ဦးနေဝင်း "လ" သုံးလုံးဆရာကြီး (လိင်၊လပ်ဘ်၊လောင်းကစား)နှင့် တပည့်ဗိုလ်ခင်ညွန်တို့၏ ကလိန်ကကျစ်အကျင့်၊စရိုက်ဆိုးများကို ရှောင်မည်ဟုသာ သံဓိဌာန်ချထားပါသည်။ ဇာနီကြီး
၁။ 7Days Journal 2015
၂။ အဝေးရောက်သံတမန်တစ်ဦး - ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ် 2001
Posted by lu bo at 12:15 PM